Qadar Marti Galintii Koobka Adduunka Lagalama Noqon Warkaasi Waa Been Abuur
HomeWararka MaantaQadar Marti Galintii Koobka Adduunka Lagalama Noqon Warkaasi Waa Been Abuur
War been abuur ah oo sheegaya in dhawr wadan oo carbeed FIFA ka codsadeen in Qadar lagala noqdo marti gallinta koobka aduunka 2022 ka ayaa lagu baahiyey markii koobaad, website u muuqda inuu qayb ka yahay warbaahinta “Local” oo ah wargeys ka soo baxa wadanka Switzerland.
Warkan ayaa la soo dhigay wajahada hore ee website magaciisa la yidhaahdo ‘The Local’ , kaas oo lagu sheegay in lix wadan oo Carbeed “Qadar ku sifeeyeen ” Xarunta argagixisada aduunka.
Laakiin, hayadda kubadda cagta adduunyada ee magaceeda ‘Fifa’ loo soo gaabiyo ayaa beenisay warkaasi iyo jiritaanka in codsi ama warqad wadamada carbeed qaarkood soo qoreen, soo gaadhay xafiiska madaxweynaha FIFA. Gianni Infantino.
Xogtan oo markii dambe, saxaafada dunidu si weyn u baahisay ayaa markii dambe laga masaxay, website kii ugu horeyn baahiyey.
Wargeyska ‘The Local’ ee magaciisa la isticmaalay, ayaa sheegay in Website ka baahiyey, ahaa mid loo ekaysiiyey kooda, balse aanu rasmiyan kooda ahayn, waxaanay xaqiijiyeen in warkaas iyo mareegtii qortayba markii dambe la masaxay oo hawada laga saaray.
Warbixinta, oo markii u horeysay ee la baahiyey ahayd, maalintii Sabtidii, ayaa lagu sheegay in wadamada, Saudi Arabia, Yemen, Mauritania, the United Arab Emirates, Bahrain iyo Egypt ay qoraal u qoreen Fifa kaas oo ay ku codsanayaan in golaha sare ee hayada kubadda cagta aduunyadu, wadanka Qadar kala noqdaan marti galinta koobka aduunka 2022.
Fifa waxay beenisay inay jirto warqad ka soo gaadhay Wadamadaas Carabta ah. Af hayeen u hadlay ayaana yidhi sidan: “Madaxweynaha Fifa waligii ma arag warqad ama qoraal noocaas oo kale ah, arintaas wax ku saabsana ka hadli maayo marna.
“Sidii ay hore u sheegtay, Fifa waxay xidhiidh joogto ah la leedahay guddida qaban qaabada koobka aduunka 2022 ee Qadar, iyo kuwa Caalamiga ah ee FIFA u dirsatay qaban qaabada koobkaad.”